Ahoana ny fomba hanampian'ny Analytics farany-amin'ny-farany ny orinasa | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanampian'ny Analytics farany-amin'ny-farany ny orinasa
Asabotsy, Aogositra 10, 2019 Alahady, Aogositra 11, 2019 Margo Kashuba
Ny fanadihadiana farany na farany dia tsy tatitra tsara sy sary mahafinaritra fotsiny. Ny fahaizana manara-maso ny lalan'ny mpanjifa tsirairay, manomboka amin'ny touchpoint voalohany ka hatramin'ny fividianana matetika, dia afaka manampy ny orinasa hampihena ny vidin'ny fantsona fanaovana dokambarotra tsy mahomby sy be loatra, mampitombo ny ROI, ary manombatombana ny fiantraikan'ny fisian'izy ireo amin'ny Internet amin'ny varotra ivelan'ny Internet. OWOX BI Nanangona fandinihana tranga dimy ny mpandalina izay nanaporofo fa ny famakafakana avo lenta dia manampy ny orinasa hahomby sy hahazo tombony.
Mampiasà Analytics an-tendrony farany hanombanana ireo fanomezana an-tserasera
Ny toe-javatra. Nanokatra fivarotana an-tserasera sy fivarotana antsinjarany maro ny orinasa iray. Ny mpanjifa dia afaka mividy entana mivantana amin'ny tranokalan'ny orinasa na manamarina izany amin'ny Internet ary manatona magazay ara-batana hividy. Nampitahain'ny tompony ny vola azo tamin'ny varotra an-tserasera sy ivelan'ny Internet ary nanatsoaka hevitra fa ny fivarotana ara-batana dia mitondra tombony bebe kokoa.
Ny tanjona. Manapaha hevitra raha hihemotra amin'ny varotra an-tserasera ary hifantoka amin'ny fivarotana ara-batana.
Ny vahaolana azo ampiharina. Ny orinasan-akanjoDarjeeling Nandinika ny vokan'ny ROPO - ny fiantraikan'ny fisiany amin'ny Internet amin'ny varotra ivelan'ny Internet. Ny manam-pahaizana Darjeeling dia nanatsoaka hevitra fa 40% ny mpanjifa nitsidika ny tranokala talohan'ny nividianany fivarotana. Vokatr'izany, raha tsy misy ny fivarotana an-tserasera dia tsy ho tonga ny antsasaky ny fividianan'izy ireo.
Mba hahazoana izany vaovao izany, ny orinasa dia niantehitra tamin'ny rafitra roa amin'ny fanangonana, fitehirizana ary fanodinana angona:
Google Analytics raha te hahafantatra momba ny fihetsiky ny mpampiasa eo amin'ny tranonkala
CRM an'ny orinasa momba ny angon-drakitra fanatanterahana ny vidiny sy ny filaminana
Ireo mpivarotra tany Darjeeling dia nanambatra ny angona avy amin'ireo rafitra ireo, izay samy manana ny firafiny sy ny lojika. Mba hamoronana tatitra mitambatra, Darjeeling dia nampiasa ny rafitra BI ho an'ny fanadihadiana farany.
Mampiasà Analytics an-tendrony farany hampitombo ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola
Ny toe-javatra. Ny orinasa iray dia mampiasa fantsona fanaovana dokambarotra maromaro hisarihana ny mpanjifa, ao anatin'izany ny fikarohana, dokam-barotra ifotony, tamba-jotra sosialy, ary fahita lavitra. Samy hafa daholo amin'ny resaka vidiny sy ny fahombiazany.
Ny tanjona. Aza atao dokambarotra tsy mahomby sy lafo ary aza manao dokambarotra mahomby sy mora fotsiny. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny famakafakana farany-to-end mba hampitahana ny vidin'ny fantsona tsirairay amin'ny sanda entiny.
Ny vahaolana azo ampiharina. Ao amin'nyDokotera Ryadom faritry ny tobim-pitsaboana, ny marary dia afaka mifandray amin'ny dokotera amin'ny alàlan'ny fantsona maro samihafa: amin'ny tranokala, an-telefaona, na amin'ny fandraisana. Tsy ampy ny fitaovana fanaovana fanadihadiana an-tranonkala matetika hamaritana hoe avy taiza ny mpitsidika tsirairay, na izany aza, satria angon-drakitra nangonina tamin'ny rafitra samihafa ary tsy nifandray. Ireo mpandinika ny rojo dia tsy maintsy natambatra ho lasa rafitra iray ireto data manaraka ireto:
Data momba ny fihetsiky ny mpampiasa avy amin'ny Google Analytics
Antsoy ny angona avy amin'ny rafitra fanaraha-maso ny antso
Data momba ny fandaniana avy amin'ny loharanom-baovao rehetra
Data momba ny marary, fidirana ary fidiram-bola ao amin'ny rafitra anatiny
Ireo tatitra mifototra amin'ity angona iombonana ity dia naneho izay fantsona tsy nandoa onitra. Izany dia nanampy ny faritry ny klinika hanatsara ny fandaniany doka. Ohatra, amin'ny dokam-barotra ifotony, ny mpivarotra dia tsy namela afa-tsy fampielezan-kevitra tamin'ny semantika tsara kokoa ary nampitombo ny tetibola ho an'ny geoservices. Vokatr'izany, ny dokotera Ryadom dia nampitombo ny ROI an'ny fantsona tsirairay tamin'ny 2.5 heny ary nampihena ny vidin'ny dokam-barotra amin'ny antsasany.
Mampiasà Analytics an-tendrony farany hitadiavana faritra na F fitomboana
Ny toe-javatra. Alohan'ny hanatsaranao zavatra iray, dia mila jerena izay tena tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ohatra, angamba ny isan'ny fampielezan-kevitra sy ireo andianteny fikarohana amin'ny doka ara-nofo dia nitombo haingana be ka tsy azo atao intsony ny mitantana azy ireo. Ka manapa-kevitra ny hanao automatique fitantanana bid. Mba hanaovana izany dia mila mahatakatra ny fahombiazan'ny fehezanteny fikarohana an'arivony maro ianao. Rehefa dinihina tokoa, amin'ny fanombanana diso, azonao atao ny manambatra ny teti-bolanao ho tsy misy na manintona mpanjifa mety ho vitsy.
Ny tanjona. Tombano ny fahombiazan'ny teny fanalahidy tsirairay ho an'ny fangatahana fikarohana an'arivony. Esory ny fandaniana mandany vola sy ny fahazoana ambany noho ny fanombanana diso.
Ny vahaolana azo ampiharina. Manamboatra automatique fitantanana,Hoff, Mpivarotra ambongadiny hypermarket amin'ny fanaka sy kojakoja ao an-trano, mampifandray ny fotoanan'ny mpampiasa rehetra. Izany dia nanampy azy ireo hanara-maso antso an-tariby, fitsidihana fivarotana, ary ny fifandraisana rehetra amin'ny tranokala amin'ny fitaovana rehetra.
Rehefa avy natambatra ireo angon-drakitra rehetra ireo ary nanangana analytics farany, dia nanomboka nampihatra ny laharam-pahamehana ny mpiasan'ny orinasa - ny fizarana ny lanja. Amin'ny alàlan'ny default, Google Analytics dia mampiasa ny maodely fanovana farany tsy mivantana. Saingy tsy raharahiany ny fitsidihana mivantana, ary ny fantsona farany sy ny seha-pifaneraserana ao amin'ny rojom-pifandraisana dia mahazo ny sandan'ny fiovam-po tanteraka.
Mba hahazoana angon-drakitra marina dia nametraka fanondroana miorina amin'ny alàlan'ny corong ny manampahaizana Hoff. Ny sandan'ny fiovam-po ao aminy dia zaraina eo amin'ireo fantsona rehetra izay mandray anjara amin'ny dingana tsirairay ao amin'ny fantsona. Rehefa nandinika ny angon-drakitra natambatra izy ireo dia nanombatombana ny tombom-barotra isaky ny teny lakile ary nahita izay tsy mandaitra ary nitondra baiko maro.
Ireo mpandalina Hoff dia nametraka ity vaovao ity havaozina isan'andro ary nafindra tao amin'ny rafitra fitantanana bid automatique. Amboarina ny bidy avy eo ka mifanaraka amin'ny ROI amin'ny teny lakile ny habeny. Vokatr'izany dia nampitombo ny ROI an'i Hoff ho an'ny doka an-tsoratra 17% ary nampitomboina avo roa heny ny isan'ireo teny lakile mahomby.
Ampiasao ny Analytics farany-a-farany hamaritana ny fifandraisana manokana
Ny toe-javatra. Amin'ny orinasa rehetra, zava-dehibe ny fananganana fifandraisana amin'ireo mpanjifa mba hanao tolotra mifanentana sy hanaraka ny fanovana eo amin'ny tsy fivadihan'ny marika. Mazava ho azy, rehefa misy mpanjifa an'arivony dia tsy afaka manao tolotra manokana ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Saingy azonao atao ny mizara azy ireo amin'ny sehatra maromaro ary manangana fifandraisana amin'ny tsirairay amin'ireo fizarana ireo.
Ny tanjona. Zarao amin'ny fizarana maromaro ny mpanjifa rehetra ary manorena fifandraisana amin'ireo fizarana tsirairay ireo.
Vahaolana azo ampiharina. ​Store, Magazay any Mosko misy fivarotana an-tserasera ho an'ny akanjo, kiraro ary kojakoja, nanatsara ny asany tamin'ny mpanjifa. Mba hampitomboana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa sy ny sandan'ny androm-piainany, ireo mpivarotra Butik dia nanokana ny serasera tamin'ny alàlan'ny ivon-telefaona, mailaka ary hafatra SMS.
Nozaraina ho fizarana mifototra amin'ny hetsika fividianany ny mpanjifa. Ny vokatr'izany dia niparitaka satria angona ny mpanjifa dia afaka mividy an-tserasera, manafatra an-tserasera ary manangona vokatra amin'ny magazay ara-batana, na tsy mampiasa ilay tranonkala mihitsy. Noho io dia nanangona sy nitahiry tao amin'ny Google Analytics ny ampahany amin'ny angona ary ny ampahany hafa ao amin'ny rafitra CRM.
Avy eo ny mpivarotra Butik dia namantatra ny mpanjifa tsirairay sy ny fividianany rehetra. Miorina amin'ity fampahalalana ity dia namaritra fizarana mety izy ireo: mpividy vaovao, mpanjifa izay mividy indray mandeha ampahefatra na indray mandeha isan-taona, mpanjifa mahazatra, sns. Amin'ny fitambarany, namantatra fizarana enina izy ireo ary namorona lalàna ho an'ny fifindrana mandeha ho azy avy amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa. Io dia nahafahan'ny mpivarotra Butik nanangana fifandraisana manokana tamin'ny ampahan'ny mpanjifa tsirairay ary nampiseho azy ireo hafatra dokam-barotra samihafa.
Mampiasà Analytics an-tsoroka farany hamaritana ny hosoka amin'ny dokam-barotra amin'ny vidiny lafo (CPA)
Ny toe-javatra. Ny orinasa iray dia mampiasa ny maodely isam-bidy amin'ny doka amin'ny Internet. Mametraka doka fotsiny izy ary mandoa sehatra raha tsy manao hetsika kendrena toy ny fitsidihana ny tranonkalany ny mpitsidika, misoratra anarana na mividy vokatra. Saingy ny mpiara-miasa mametraka doka dia tsy miasa marina foana; misy mpisoloky eo amin'izy ireo. Matetika, ireo mpisoloky ireo dia manolo ny loharanom-pifamoivoizana amin'ny fomba iray toa ny nahatonga ny tambajotran'izy ireo hiteraka fiovam-po. Raha tsy misy analytics manokana mamela anao hanara-maso ny dingana rehetra ao amin'ny rojom-barotra ary ho hitanao hoe iza avy ireo loharano mitaona ny valiny, dia saika tsy hay ny mamantatra hosoka toy izany.
Banky Raiffeisen dia nanana olana tamin'ny fisolokiana amin'ny marketing. Hitan'ny mpivarotra fa nitombo ny vidin'ny fifamoivoizana raha toa ka tsy miova ny vola miditra, ka nanapa-kevitra izy ireo fa hijery tsara ny asan'ny mpiara-miasa.
Ny tanjona. Hamarino ny hosoka amin'ny alàlan'ny famakafakana farany. Araho ny dingana rehetra ao amin'ny rojom-barotra ary fantaro izay loharano misy fiantraikany amin'ny hetsiky ny mpanjifa kendrena.
Vahaolana azo ampiharina. Mba hijerena ny asan'ny mpiara-miasa aminy, ny mpivarotra ao amin'ny Raiffeisen Bank dia nanangona angon-drakitra momba ny hetsiky ny mpampiasa tao amin'ilay tranokala: fampahalalana feno, tsy voaporofo ary tsy voamarina. Anisan'ireo mpanjifa manana fantsona farany akaiky indrindra dia nisafidy ireo izay nanana fiatoana kely tsy dia lehibe izy ireo teo anelanelan'ny fotoam-pivoriana. Hitan'izy ireo fa nandritra ireo fiatoana ireo dia navadika ny loharanom-pifamoivoizana.
Vokatr'izany, ireo mpandalina Raiffeisen dia nahita mpiara-miasa marobe izay nampiasa ny fifamoivoizana avy any ivelany ary namidy izany tany amin'ny banky. Ka nijanona tsy niara-niasa tamin'ireto mpiara-miasa ireto izy ireo ary tsy nanary ny fandaniam-bolan'izy ireo intsony.
Nasongadinay ireo fanamby ara-barotra mahazatra indrindra izay afaka hamahana ny rafitry ny fanadihadiana farany. Amin'ny fampiharana, miaraka amin'ny fanampian'ny angon-drakitra mifangaro momba ny fihetsiky ny mpampiasa na amin'ny tranokala na ivelan'ny Internet, fampahalalana avy amin'ny rafitra dokam-barotra, ary angon-drakitra fanaraha-maso antso, dia afaka mahita valiny amin'ny fanontaniana maro momba ny fanatsarana ny orinasanao ianao.
Tags: Attributionvidiny isaky ny hetsikadokotera ryadomhifarana-to-endfanadihadiana faranyowox bi
Margo no Chief Marketing Officer an'ny OWOX BI, mpamatsy vahaolana amin'ny fanadihadiana an-tranonkala any Eropa atsinanana. Ny vokatr'ilay orinasa dia ahafahanao mahazo tatitra momba ny varotra miorina amin'ny angon-drakitra, manombatombana ny fahombiazan'ny fantsom-barotra tsirairay, manamboatra analytics farany, ary mandray fanapahan-kevitra ara-barotra mifototra amin'ny angon-drakitra.
Paikady 5 hampihemorana bebe kokoa ny varotra an-tsekoly amin'ny taona 2019